यि महान आमा- जस्ले आफ्नो छोरा बितेपछि, २५ जना बुवा-आमा नभएका बच्चाहरु ल्याएर पा’लिन् (भिडियो हे’र्नुहोस्)
Homeसमाचारयि महान आमा- जस्ले आफ्नो छोरा बितेपछि, २५ जना बुवा-आमा नभएका बच्चाहरु ल्याएर पा’लिन् (भिडियो हे’र्नुहोस्)
April 23, 2021 admin समाचार 2124
नेपालकै पहिलो साझा बसकी चा’लिका हुन्, रेबिका थापा । निकै नै सँघर्षशिल महिला रेबिकाको जीव’नको कथा कुनै चलचित्रको कथा भन्दा कम छैन । श्रीमानको पि’डा खेप्न नसकेर गाउँबाट आफ्नो छोरा बोकेर केहि समय अघि रेबिका काठमाडौं आ’एकी थिईन् । काठमाडौं छिरेपछि छोरालाई पढाउन र बढाउन रेबिकाले अथक मे’हेनत गर्न थालिन् ।
त्यसैबिच उनले टेम्पु चला’उन थालिन्, घरमा सानो छोरा छो’डेर रेविका काममा जान्थिन्, छोरालाई हेर्ने कोहि नहुँदा उनले छोरालाई घरमा थुनेर काम गर्न जानु’पर्ने बाध्यता थियो । पछि रेबिकाको जीवनमा बिस्ता’रै रामे हुँदै थियो, उनले नेपालको लागि पहिलो साझा बसको चालि’काको परिचय पनि बनाईन् तर एक्का’सी उनको छोराको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रियो ।
छोरालाई अने’क प्रयाश गर्दा पनि रेबिकाले बचाउन सकिनन् । छोराको अन्त्यपछि रेविका सम्पुर्ण का’महरु छोडेर घरमै बस्न थालिन् । पछि उनको जीव’नमा अर्को पुरुष आए, उनले जीवन चलाउन साथी चाहिन्छ भन्ने बुझेर बिवाह गरिन् । दोसे बिहेबाट छोरा पनि ज’न्मिए । त्यसपछि उनको मनमा अन्य बालबालिकाहरुको उद्धा’रको सोच आयो ।
उनले आफ्नै छोराको नाममा बि’वेक स्च्छ सेवा केन्द्र खोलिन् र परिवार र आमा बुवा बि’हिन बाल कालिकाहरुको भविष्य बनाउन लागि परिन् । हाल उनको केन्द्रमा २५ जना आमा बुवा बिहिन बालबा’लिकाहरुको भष्यि फुल्दै छ । काठमाडौंमा एक लाख तिरेर घरभाडा तिर्दै अघि बढिरहँदा र नानी बाबुह_रुको भविष्य बनाईरहँदा रेविकालाई गाह्रो पर्दै गाये र हाल उनको आश्रम छेऊ बिवेक स्वस्च्छ सेवा केन्द्रकै भवन नि’र्माणका लागि महायज्ञ आयो’जना हुँदैछ । इताजा खबरबाट
किशोर र लक्ष्मी प्र’कारणको खेलाडी को ? लक्ष्मीलाई झु’ ट बोल्न लाउने दुलही बनाएर रु न लाउने को हो ? भयो प’र्दाफास (हे’र्नुहोस भिडियो)
February 2, 2021 admin समाचार 3960
May 1, 2021 admin समाचार 2301
तपाईंको दाम्पत्य जीवन सु’खमय छ । खुसीसाथ दुबैले दाम्पत्य जीवन भोग गरिरह’नुभएको छ । एकआर्काको भावना बुझ्नु’भएको छ । आपसी साथ र सह’योगबाट घर-व्यवहार चलाउनु भएको छ । सबै कुरा ठिकठाक छ । यस किसिमको
प्रकृति मल्ल जसको विश्व रेकर्ड राख्न सफल विश्वकै उ’त्कृष्ट ह्याण्डराइटिङ भाईरल बन्यो
May 3, 2021 admin समाचार 2290
सानै उमेरमा विश्वकै उत्कृष्ट ह्याण्ड’राइटिङबाट विश्व रेकर्ड राखेकी प्रकृति मल्ल’को बारेमा थाहा नपाउने कमै छन् । नेपालमा मात्र हैन विश्वभरी नै उनको चर्चा र उनको ह्याण्ड’राइटिङ भाईरल भएको छ । पछिल्लो समय सा’माजिक सञ्जाल टिकटकमा
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (205551)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (196404)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (194733)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (194419)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (192250)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (185035)